Dagaalo ka dhacay Gedo iyo Hiiraan. - Wargeyska Faafiye
Home 2012 July 29 .Warka Dagaalo ka dhacay Gedo iyo Hiiraan.
Dagaalo ka dhacay Gedo iyo Hiiraan.
July 29, 2012 · by	Liban Farah ·
Dagaalo ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobalada Gedo iyo Hiiraan, waxaana ay dhex mareen ciidanka dowladda KMG, kuwa Ahlu Sunna iyo Al-Shabaab.
Duleedka degmada Garbahaarey ayaa dagaal halkaas waxaa uu ku dhex maray ciidanka dowladda oo ay kaabayaan ciidanka Kenya — oo qeyb ka noqday howlgalka AMISOM — iyo dhinaca kale oo ay ka soo jeedaan Al-Shabaab; waxaana la sheegay qasaaro inuu ka dhacay halkaas.
Waxaa dagaalkaa uu bilawday ka dib markii Al-Shabaab weerar ay ku qaaday fariisin ciidanka dowladda ay ku leeyihiin tuulada Barwaaqo ee duleedka degmada Garbahaarey.
Shalay ayay ahayd markii dagaal sidaan oo kale uga dhacay deegaan ka tirsan gobalka Gedo.
Gudoomiyaha maamulka dowladda ee gobalka Gedo, Maxammad Cabdi Kaliil ayaa wuxuu sheegay dagaalkaas inay ku dileen labaatameeyo ka tirsan ciidanka Al-Shabaab, balse ma jiro wax war ah oo dhianca Al-Shabaab laga helay oo ku aadan dagaalkaas.
Dhinaca kale ayaa dagaal waxaa isla maanta uu ka dhacay degmada Matabaan ee gobalka Hiiraan.
Dagaalkan ayaa wuxuu uga duwan yahay midka ka dhacay Gedo, wuxuu u dhaxeeyaa ciidanka dowladda iyo ciidanka Ahlu Sunna iyadoo ay muuqatay in labada dhinac xiriirkooda soo wanaagsanaanayay.
Dagaalka ayaa wuxuu ka dambeeyay ka dib markii gaadiid kuwa dagaalka ah ay soo galeen degmada Matabaan, waxaana gaadiidkaas watay ciidan taabacsan sarkaal dhawaan loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha degmada Matabaan.
Ciidankaas iyo sarkaalkaas — oo dhawaan gudoomiyaha maamulka dowladda ee gobalka Hiiraan u magacaabay gudoomiyaha degmada Matabaan — markii ay soo galeen degmada gudaheed waxaa meesha isaga baxay ciidankii Ahlu Sunna, sida wararku ay sheegeen.
Balse rasaast xoogan ayaa bilaabatay ka dib markii ciidankii Ahlu Sunna dib ay u soo laabteen iyagoo gurmad ka helay degmada Guriceel, waxaana dagaalka qeyb ka ahaa gaadiidka dagaalka oo ay kala taageerayaan labada dhinac.
Ahlu Sunna ayaa mudo gacanta ku haysay degmada Matabaan waxaana ay ka maamulaysay dhinaca gobalka Galgaduud, hasa ahaatee saraakiisha dowaldda ee gobalka Hiiraan ayaa waxaa ay u muuqdaan inay hada ka biyo diidan yihiin arrintaas.
Baazi Osman — Muqdisho
London Somalia conference: 'Britain is playing catch up'
Somali minister hints at move to ban FGM.